Puntland:Maba Lullatee Maxay Leeftaa!Warbixin Xaasaasiya | Berberanews.com
Puntland:Maba Lullatee Maxay Leeftaa!Warbixin Xaasaasiya
December 4, 2013 | Published by: admin
Faroole oo Guddi u magacaabay Doorasho aan saansaanteedu muuqan iyo rejadda Puntland oo sii siqiiraysa”Akhri warbixin dheer oo Gobanimonews ka diyaarisay xaalada puntland
Garoowe(Berberanews)-Madaxweynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole ayaa maanta magacaabay Guddida xalinta Khilaafaadka iyo doorashooyinka Puntland, kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa.
Wareegtada soo baxday ayaa rejo ka muujinaysa qabsoomida Doorasho baarlamaaniya iyo mid Madaxweynenimo oo Gobolka ka dhacda, xili bulshada qaybaheeda kala duwani walaac ka qabaan arrintaasi.
Guddidan oo ka kooban sideed xubnood waxa gudoomiye u ah Eng, Yuusuf Abshir Cadami, kuwaasoo ka shaqeynaya howlaha doorashooyinka Puntland iyo xalinta khilaafaadka.
Qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Puntland ayaa horay uga diday in Faroole inuu magacaabo Guddidan, maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland.
Dadweynaha Reer Puntland eek u nool Gobolada Nugaal, Bari iyo Mudug ayaa sugaya hanaan ku dhisan nabad-gelyo iyo dariiq saamaxaya in doorasho dalka ka dhacdo 8 bisha January ee sanadka, taasoo ay ka horayso ansixinta Baarlamanka dooranaya Madaxweynaha oo loo cayimay in la soo dhamaystiro 8 Bishan December.
Balse taasi waxa caqabad ku ah khilaafyo dhanka Gobolada ah oo suurto gelin kara in mar kale doorashooyinku fashilmaan, taasoo madaxweyne Faroole iyo ku-xigeenkiisu dariiqa u sii xaadheen.
Isimadda Beelaha Degen gobollada Sool, Buuhoodle iyo Sanaag Barri ayaa gaashaanka ku dhuftay Ansixinta xubanaha baarlamanka uga qayb-gelaya.
11 Isin ee Gobolka Sool iyo Buuhoodle ayaa muddo haatan laga jooga saddex bilood go’aanka ka bixitaanka Puntland Garoowe gaadhsiiyay.
“Dhulbahante wuxuu samaystay Maamulka Khaatumo, puntland-na way ka baxeen, markaa waxaan filayaa inay sheekadaa xulista baarlamanku iska dhamaatay, hadaan dad foojari ah Garoowe laga uruursan”sidaasi waxa yidhi siyaasi ka soo jeeda Gobolka Sool oo Gobanimonews la hadlay todobaadkan bilowgiisii.
Kaasoo intaasi ku daray “dhamaan Isimaddu way diideen inay ansixiyaan xubnihii baarlamanka Puntland ugu jiray, taasna waxa xigay xasuuqii ka dhacay Taleex oo ahaa wax aad u fool xun oo dhamaan bulshada wada damqay, markaa faroole iyo puntland waxba uma yaalaan Caro dhulbahante, sida muuqata ama ay tahayba xaqiiqdu”.
Dhinaca kale, Deegaamada Bariga Sanaag, ayaa ka sii baxaya gacanta Puntland, waxaana xusid mudan sida ay Gobanimonews xogo hoose ku heshay in badhtamihii bishii October inta badan Deegaamada gobolkaasi laga soo qaaday agabkii Xafiisyada Dawladdu ku shaqaynayeen.
Waxaana taasi ka dambeysay markii xidhiidhkoodu meesha ka baxay Bulshada Sanaag Barri iyo Maamulka Puntland, mar qudhana saaxadda siyaasadda laga waayay siyaasigii isku hayay labada dhinac ee C/laahi Jaamac Ilka Jiir oo dib u liqay rajadii uu ka qabay inuu madaxweyne isaga sharaxo Puntland doorashadan soo socota.
“Puntland iyo Sanaag waxa isku hayay Ilka jiir oo hore loogu balanqaaday inuu madaxweynenimo isu sharaxayo Doorashada Puntland balse hada candhuuftiisa dib u liqay, markii faroole waxba u ogolaan waayay”sidaasi waxa laga soo xigtay sarkaal sare oo ku sugan magaalada Boosaaso oo siyaasada Gobolka xogogaal u ah.
Ujeeddada ka dambeysa Dagaalka Taleex
Marxaladaha noocan ayaa markii ay soo waajaheen labada Masuul ee ugu sareeya Madaxtooyada Garoowe, waxa khasab ku noqotay inay sameeyaan talaabo deg deg ah oo fursad u siin karta wakhti dherer kale iyo in doorashada dib loo riixo.
Maamulka ayaa labadii usbuuc ee u dambeeyay ciidamo tiro badan dhoobay Deegaanka Tuko-raq iyo aagaga soohdinta degmada Taleex, halkaasoo isaga muuqdaan kuwa somaliland.
Taasi waxay sawiraysaa saansaan collaad Gobolka laga hurinayo, taasoo dagaalkii ka dhacay Taleex lagu daah furay.
“Deegaamada Tuko raq iyo Taleexba waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan somaliland iyo Puntland, waxaanu maamulka Garoowe ciidan soo dhoobay Tuko raq waxaanu duulimaad ku yahay carro khaatumo, iyadoo ujeedada ugu weyn ee dagaalkaasi uu uga danleeyahayna ay tahay inuu dalka xaalad dagaal geliyo si wakhtiga doorashada dib loogu riixo ilaa lix bilood sida uu dhigayo Dastuurka Puntland”sidaasina waxa sheegay Mahad Cali Samatar oo xil sare ka haya Maamulka Khaatumo oo Gobanimonews khadka Taleefoonka ugu waramay isagoo ku sugan degmada kala-baydh ee Gobolka Sool.
Mahad Cali Samatar ayaa intaasi ku daray “Faroole iyo ina cali shire sidaas ayay doonayaan, laakiinse waxaan filayaa 9 Bisha December hadii la gaadho oo wax sax ah laga waayo waxaan filayaa inay sii haysan doonin meesha”.
Siyaasiga Reer Sool ayaa ugu dambeyn cambaareeyay falkii lagu laayay shacbiga reer Taleex “Taleex runtii waxa ka dhacay Xasuuq fool xun oo aad looga wada xumaaday, horta marka hore waan cambaareynaynaa dagaalkaasi lagu layay dadka aan waxba galabsan, marka labaadna waxaan bulshada caalamka ugu baaqaynaa in Faroole iyo cabdisamad cali shirre Maxkamad lagu soo taago xasuuqa ay ka geysteen Taleex”ayuu yidhi.
Rejadii Nickolas Kay oo sii gudhaysa
Ergeyga Xoghayaha Guud ee Qaramada u qaabilsan arrimaha Somaliya Nickolas Kay ayaa laba todobaad ka hor soo gunnaanaday safar hawleed uu ku marayay Gobolka, waxaanu dhamaadkii booqashadiisa rejo ka muujiyay hanaanka doorashooyinka Puntland, inkasta oo uu tibaaxay khaladaad badan oo jira oo u baahan in la saxo.
“Doorashooyinka Puntland si wanaagsan ayay u socdaan laakiinse waxa jira waxyaabo u baahan in la saxo”ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray bishii hore dhamaadkeedii.
Laakiinse inkasta oo uu rejadaasi muujiyay, hadana waxa jira waxyaabo badan oo marba marka ka dambeysa yihdidiilada reer Puntland iyo daneeyayaasha Doorashooyinkeeda god madow ku sii ridaya, kuwaasoo laga xusi karo khilaafka ka taagan goboladda qaar.
Ka bixitaanka Puntland ee Sool iyo Sanaag
Labadan Gobol waxay ka mid yihiin Goboladdii lagu ansixiyay Dastuurka Puntland, hadii ay ka baxaana waxa imanaysa in dib loo sameeyo dastuur cusub oo puntland yeelato, kaasoo waafaqsan Goboladda hada ku jira xayndaabka soohdinta lagu salaynayo doorashada.
Faroole oo Addis looga yeedhay xili uu Mushkilad gacmaha kula jiro.
Si kastaba ha ahaatee Doorashooyinka Puntland ee Madaxweynenimada oo ku beegan 8 bisha January ee sanadka 2014, taasoo ay inaga xigto mudo 40 maalmood ka yar ayaa waxa horyaala tobanaan caqabadood oo suurto galnimadooda meesha ka saaraya.
Waxaanay hada isweydiinta soo baxaysaa tahay maxaa xigi doona xaalada qalafsan ee mar kale Gobolka ka taagan? Xalse ma loo heli karaa khilaaf siyaasaddeed oo salka ku haya doorashooyinka dib u dhacu ku yimi markii labaad.
Waxaana suurto gal in maalmaaha soo socda isbedel siyaasaddeed oo dhinacyo badan saameynayaa laga dareemo Gobolka, kaasoo ku xidhan hadba sida Faroole u waajaho xaalada taagan.
Inkasta oo la hadal hayo in looga yeedhay Dalka Itoobiya oo uu safar ugu bixi doona dhawrka beri ee inagu soo fool leh.
Safarkaasoo isaga laftiisu la xidhiidha sida ay Gobanimonews xogaha ku heshay dagaalka dhawaan ka dhacay Taleex iyo colaada ku huraysa Gobolka Sool.